Roma Oo Boos Ka Diyaarsatay Champions League Kulankii Macasalaamaynta Totti
HomeWararka MaantaRoma Oo Boos Ka Diyaarsatay Champions League Kulankii Macasalaamaynta Totti
28/05/2017 Abdiwahab Ahmed
Francesco Totti ayaa soo af-jaray 25 kii sanadood ee uu kubadda cagta ku soo dhex jiray, ciyaartii ugu dambeysayna u saftay naadigiisa Roma, kulan ay kaga badisay kooxda Genoa kuna bed-baadsatay boos ay ka hesho horyaalka Champions League wareegiisa hormaynta ee koobaad sanadka dambe.
Weeraryahankan 40 sanno jirka ah, oo dhaliyey 307 gool, 786 ciyaarood oo uu u saftay kooxda kaliya ee uu ku laastay mustaqbalkiisa, ayaa ciyaarta bedel ku soo galay daqiiqadii 54 aad, garoonka oo dhamina u istaagay si ay u sharfaan halyeygan macasalaamaynaya dunida kubadda cagta.
16 sanno jir, Pietro Pellegri, ayaa noqday, ciyaaryahankii ugu horeeyey ee dhashay 2001 dii, ee gool ka dhaliya horyaalka Talyaaniga ee Seria A, kadib markii uu kooxdiisa Genoa 1-0 hogaanka ciyaarta ugu gacan galiyey.
Laakiin, gool uu daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta Diego Perotti dhaliyey ayaa Roma isku dul saaray inay guusha ciyaarta ku hesho sidoo kalena kaalinta labaad ku dhamaysato horyaalnimada.
Roma, oo ku dhici lahayd ciyaaraha isreeb reebka si ay boos uga raadsato Champions League, waa haddii aanay guuleysan lahayne, ayaa goolkii uu kaga naxsaday Pellegri furitaankii ciyaarta, waxaa meesha ka saaray goolkii barbar dhaca ee uu saxeexay Edin Dzeko.
Markii 16 daqiiqo oo kali ahi dhamaadka ciyaarta ka dhinaayeen, weeraryahanka hore Manchester City ugu soo ciyaaray ee Dzeko, wuxuu kubadda dib ugu soo dhiibay Daniele de Rossi, oo isaguna ah halyeyga Roma mustaqbalkiisa ku soo wada qaatay sida Totti, ayaa kooxdiisa hogaanka u soo gacan galiyey.
Laakiin, shan daqiiqo kama soo wada wareegin markii, Darko Lazovic uu Genoa ciyaarta ku soo celiyey ee uu goolkii barbar dhaca u saxeexay daqiiqadii 79 aad.
Waxayse wax kastaa kala cadaadeen, markii, Diego Perotti, saacada oo dhamaadkii ku dul taagan goolkii guusha u saxeexay naadiga caasimada Talyaaniga.
Dallas Cowboys 31-34 Green Bay Packers: Bandhigga Ciyaartii Halganka
Dalxiisyaasha horyaalka Ingiriiska U Daawasho Yimaada
12/12/2016 Abdiwahab Ahmed